FARAQA UGU WEYN EE LO'DA COWS - XOOLAHA
Dhammaanteen waxaanu caadeysnaa xaqiiqda ah in lo'da ay tahay wakiil ah lo'da.
Dayactirka xayawaanka noocan oo kale ah waa arrin aad u dhib badan, maaddaama ay u baahan tahay inay bixiso aqal deggan iyo mid daaqi ah, iyo xaddiga qadarka badan.
Laakiin waxa la sameeyo haddii aad rabto wax aad u badan, caano guri, jiis iyo labeen dhanaan!
Xaqiiqdii, xalku waa, iyada oo leh, asalka dhabta ah. Maanta waa suurtagal in la iibsado lo'da cambareynta guriga.
Hayso wax aad u sahlan, inkasta oo qadar badan oo caano ah ay ka timaaddo ma shaqeyn doonto. Hoos waxaan ku qeexnaa dhamaan sifooyinka lo'da iyo noocyada caamka ah.
Waa maxay nooca lo'da ee caanaha waaweyn ee weynaanta?
Ma jiraan wax aan caadi ahayn ee lo'dooyinkan, marka laga reebo dabeecadda gaaban, iyo, si waafaqsan, miisaanka. Waxay markii hore u muuqdeen Hindiya, halkaas oo lo'da lagu caabudo sababo diimeed.
Tan iyo markii dadweynaha dalkan ay aad u liidan yihiin, arrinta soo saarka "lo'da dhaqaale" waxay noqotay mid aad u macquul ah. Natiijo ahaan, lo'duna way ka muuqatay.
Ma yaabi doonto qof kasta oo noocaan ah ee lo'da aanu lahayn wax soo saarka hilibka, inkasta oo qaar ka mid ah loogu talagalay ujeeddadaas. Inta badan, sida lo'da waxaa ka mid ah sifooyinka qurxinta ee dibedda iyo helitaanka qadar yar oo caano ah ee guryaha.
Qaababka muuqaalka iyo xuduudaha kale ee wakiillada
Markii ugu horeysay, sacabka dwarf ayaa la soo doortay 15 sano ka hor, sidaas awgeed maanta waxaa jira 26 ilaa 30 nooc oo ah noocyada noocyada adduunka ah. Nooc waa la tixgelin doonaa cirifka haddii uu leeyahay:
Heerarka kobaca ee ugu sarreeya 90 ilaa 110 sentimitir dherer ahaan.
Isbeddelka miisaanka qof weyn oo qiyaas ahaan ah 100 ilaa 110 kiilo, iyo sidoo kale 250 ilaa 350 kiilo garaam.
Qadar yar oo caano ah, oo lo'du awoodo in ay soo saarto hal maalin (tirada ugu badan waa 3 litir, inkastoo qaar ka mid ah jilaalka ay ku faani karaan 7 litir).
Maaddaama naasaha dwarf ay soo saaraan jilayaal, saynisyahannadu waxay dareen badan ku bixiyeen in ay samayso lo'da cusub oo u adkeysanaya suurtagalnimada saameynta jawiga dibadda.
Sidaa darteed, xubnaha intooda badani waxay ku faanaan difaac wanaagsaniyo sidoo kale iswaafajinta wanaagsan ee xaaladaha cimilada ee kala duwan ee xabsiga.
Waxay aad u yihiin marar dhif ah ayay jiradaan, iyo haddii ay dhacdo muujinta hargabka, wax dhib ah oo badanaa ma soo baxaan, calaamadaha oo dhan way baaba'ayaan dhawr maalmood. Xaqiiqadani waxay sii fududeyneysaa taranta cowska.
Iyadoo ay sabab u tahay sifooyinka wanaagsan ee difaaca jirka, lo'da qoryaha ayaa si aad ah loo adeegsaday xulashada lo'da waaweyn. Hiddaha ay u gudbiyaan waxay u adeegaan sidii ay uga badbaadin lahaayeen tiro badan oo ah cudurrada neefsashada iyo cudurada viral.
Waxaa sidoo kale la ogaaday in marka laga gudbo noocyada kale ee lo'da ee caleen, waxay si wayn hoos ugu dhigeen dhimashada dhalinyarada. Tani waxaa kale oo lagu sharxi karaa dabeecadda caqligalka ah ee lo'da yar, oo sidoo kale leh dareen hooyo oo fiican.
Caano ku saabsan cows
Caanaha lo'dooyinkani waxay noqon karaan cabsi la'aan loo aanaynayo faa'iidooyinka ugu muhiimsan. Ma aha oo kaliya dhadhan fiican leh, laakiin sidoo kale hodan ku jira ka kooban kiimikada.
Haddii aad isbarbardhigto caanaha lo'da caadiga ah, marka ugu horeysa oo dhan waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa saamiga mugga ee maaddooyinka dufanka iyo fosfolipids.
Haddii caanaha lo'da caadiga ah qadarka ugu horreeya uu ka sareeyo, ka dibna caanaha lo'da ee dwarf waxaa jira qadar badan oo fosfolipids ah. Arrinta noocan ah waa mid cajiib ah maskaxda iyo nidaamka dareenka oo dhan, maadaama ay kaalin weyn ka ciyaarto geedi socodka dib u soo celinta unugyada dareemayaasha ee jirka bini'aadamka.
Sidaa daraadeed, caanaha lo'da ee cuurtu waa alaabada nafaqada ah ee lagama maarmaanka ah. Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo carruurta iyo dadka qaba dhibaatooyinka mareenka caloosha iyo mindhicirka, nidaamka wadnaha iyo xitaa kuwa caanaha ah.
Sababtoo ah cowska curyuhu weli si aan fiicnayn loogu qaybiyo wadamadeena?
Xaqiiqdu waxay tahay in lo'du ay aad u qiimo badan tahay maaha oo keliya mudnaanta, lakiin sidoo kale qiimeynta qiimaha shakhsiga. Iyo haddii mid ka mid ah dalkiisi dibi mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee "Zebu" waxaa laga iibsan karaa in ka yar $ 100, markaa qiimaha uu badanaaba gaaro dhowr kun oo doolar.
Si kastaba ha ahaatee, arrintan badan ee dad badan waxay noqon kartaa mid dhiiri galiya ganacsi u gaar ah iyo taranka cowska, oo aan faa'iido lahayn oo kaliya jeebka, laakiin sidoo kale jirka iyo nafta.
Sabab kale ayaa loo tixgelin karaa aan la qabsan karin qaar ka mid ah jilayaasha si ay u noolaadaan una noolaadaan cimilo qabow.
Isku mid ah "Zebu" ama lo'da Angus waxaa inta badan loo qaybiyaa meelaha leh cimilada hoos-u-dhaca. Waa inaan ku dhawnahay sanadka oo dhan si loo ilaaliyo qolka dabiiciga ah ee daboolan iyada oo aan laga helin cunto cusub oo cagaaran.
Dhamaan arrimahan waxay keeni karaan miisaan lumis iyo qiimaha caanaha oo hooseeya. Sidaa darteed, ka hor inta aadan iibsan caleemaha dwarfka, weydii sida fiican ee loogu habeeyey xaaladaha cimilada ee dhulalka aad ku nooshahay.
Ku dhawaad ​​xulashada kaliya ee dhulalka wadamada CIS ayaa noqon kara mid aad u sarreeya oo sarreen ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay si gaar ah u tilmaamaysaa noocyada hilibka ee lo'da, si ay u helaan caano ka yimaada waa hawl aan la awoodin. Laakiin isla markaa, waxay leedahay tiro ka mid ah faa'iidooyinkeeda:
Nooca beerashada, oo aan si cad u qeexin qiimaha quudinta iyo qaybaha kale ee lagama maarmaanka ah ee daryeelka.
Cuntada ma ahan mid aan macquul aheyn, waxay cuni karaan dhirta iyo geedaha oo idil.
Sidoo kale, qaadashadoodu waa ka yar tahay tan idaha.
Caanaha uma baahna inay dhisto qoryo gaar ah oo loogu talagalay dayactirka.
Dareemidda jidhkooda iyo lakab kale oo timo qaro weyn leh waxay u oggolaanayaan inay ku adkeeyaan xaaladaha cimilada ugu xun ee aan lahayn dhibaatooyin. Dibadda, dibedda waxaa lagu hayaa sanadka oo dhan.
Si aad u fiican ayaa dib loo soo saaraa.
Dhallaanku waa mid aad u fudud, cunnadu waxay leeyihiin dareen aad u wanaagsan, taas oo ay ugu wacan tahay dhimashada dhalinyarada oo aan si caadi ah loo arag.
Waxay ku tilmaameen difaac aad u wanaagsan, ma ayan la kulmin cuduro caadi ah oo u eg sidii lo'da caadiga ah.
Qeexida caleemaha dwarf ee lo'da "Zebu"
Caadiga caadiga ah ee jiritaanka "Zebu" waxaa loo tixgelinayaa inay tahay jasiiradda Sri Lanka, laakiin maanta waxay maamusho si ay ugu guulaystaan ​​iyaga oo jooga bannaankeena furan.
Sannado badan, caanaha waxaa loo tixgeliyey in ay yihiin kuwo bakhtiyan ah, maxaa yeelay jilayaasha iyo xoolaha caadiga ah ee xoolaha ayaa isku dayay in ay ka gudbaan lo'da ballaaran si ay u gaaraan dhalidda sare.
Laakiin maanta maanta waa la kala furfuray si gooni gooni ah, taas oo u oggolaanaysa inay ilaaliso midnimadeeda oo ay ka ilaaliso joojinta ugu dambaysa. Tirada shakhsiyaadka caanahan ayaa koraya oo keliya.
Caleemaha dibedda iyo sifooyinkiisa
Xitaa qaangaarka qaangaarka ah, lo'da Cuubu waxay u egtahay mid u eg sida weylaha yaryar marka loo eego xayawaanka waaweyn.
Qiyaasaha ugu sareeya ee jidhkooda waa 91 sentimitir, taas oo ah, dhererkoodu aanu xitaa gaarin xuddunta dadka.
Miisaanka caadiga ah ee loogu talagalay caleemaha cufan ayaa sidoo kale noqon kara mid aad u la yaab leh, maaddaama celcelis ahaan ay tahay 80 kiilo oo keliya.
Marka laga eego midabkooda, lo'da dhagaxu waxay noqon kartaa caanaha fudud ama bunni. Midka ugu caansan midabka midabka ah, iyada oo aan laga reebin iyo russovoe, dabeecadda ee lo'da Ruush.
Jirku waa muddo dheer, sababtoo ah baahida loo qabo in laga ilaaliyo cayayaanka xaaladaha kulul ee India. Dhismaha waxay leeyihiin awood aad u xoog badan, inkasta oo lugaha ay u muuqan karaan kuwo khafiif ah.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee ilaalinta iyo taranka lo'da "Zebu"
Quudinta lo'da cambarka waa wax ugu fudud ee noqon kara. Nolosha oo dhan waxay noqoneysaa mid ku filan raashin ka kooban hal hay iyo biyo. Dabcan, in cunnooyinka dheeraadka ah ay sidoo kale si fiican u saameyn doonaan koritaanka iyo tirada caanaha, hase yeeshee wali ma ahan marka la quudiyo lo'da caadiga ah.
Xilliga diiran, "Zebu" waxaa si sahlan loogu hayn karaa meel bannaan oo furan, siinta fursad si madaxbannaan loo helo cunto. Isla mar ahaantaana, faa'iido aad u weyn iyo qaddarin ka mid ah lo'da waxa weeye joogitaanka buruqda iyaga oo leh unugyada dufanka ku urursan ee gadaashooda.
Waqtiyada caadiga ah, dufanku marna lama isticmaalin, laakiin waa isku uruursadaa, laakiin inta lagu jiro soomidda qasabka ah uma oggola xayawaanku inuu dhinto.
Miyuu jilitaanku leeyahay qalad?
Faa'iidooyinka ka mid ah noocyada this waxay noqon kartaa oo keliya faa'iido darrada ah ee nooca cows ee naar. Taasi waa, waxaan ka hadli karnaa kaliya qadar weyn oo caano ah iyo awood la'aanta xayawaanka si loo xaqiijiyo wax soo saarka hilibka.
Dhamaan dhinacyada kale, kuwani waa kuwo degan, xayawaan saaxiibtinimo ah oo u baahan ugu yaraan dareenka iyo quudinta. Sida daryeelka, welwel kaliya ee ku saabsan breed xoolaha waxay noqon kartaa mid caan ku ah lo'da iyo isku dhafka dhogorta.
Tilmaamo kale oo muhiim u ah inay la wadaagaan jiilalka mustaqbalka
Dareemidda xasilinta ee lo'da "Zebu" wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si fudud u ilaaliso labadaba daaqada iyo daaqsinta lacag la'aanta ah.
Uma tartami doonaan booska xayawaanka kale, ma jebin doonaan deyrta, ama waxyeello kale ma keenaan.
Ka dib markaan caleemaha la gooyey cawska, kaliya cawska quruxda badan oo qumman ayaa sii ahaan doona, isla markiiba waxa bacrimiyey qaansarrada naftooda.
Qiimaha quudinta "Zebu" wuxuu noqon doonaa mid aad u yar, xagaaana ma jiro wax dammaanad ah.
Sidaa daraadeed caanahaas oo ah cows-ka waxa loola jeedaa xayawaanka noocyada kala duwan ee beerashadamarka loo eego iibsashada badeecada macnaheedu maahan in la isticmaalo (si fiican, ama kuwa ugu yar).
Wax soo saarka beerka: caanaha caanaha ee aad filan karto?
U yeedhidda lo'da yar ee wax soo saar leh way adag tahay maxaa yeelay caano waxay bixisaa qadar aad u yar. Celcelis ahaan, gunnada caanaha maalinlaha ahi waa 3 litir. Haddii aanad ku jirin cadad "Zebu", iyo iskutalladeeda, ka dibna sawirkani si weyn ayuu u kordhi karaa.
Si kastaba ha noqotee, waxsoosaarku wuxuu kaloo ku jiri karaa awoodda lo'daas inay keenaan caruurtooda. Marka la eego, waxay aad u sarreeyaDuufaanta yaryar waxay ka muuqan kartaa beerkaaga sanad walba. Isla mar ahaantaana, awoodda wax-soo-saarku waxay ku jirtaa lo'da cuuryaan muddo dheer, ilaa 10 sano.
Cows-ka cows iyo faa'iidooyinka ay ka kooban yihiin
Inkasta oo tani noocan oo kale ay leedahay cirifka, hadana, baaxadda iyo miisaanka ayaa leh wax ka badan kuwa aan kor ku sharaxnay. Waxay badanaaba ku furtay Australia, taas oo ah waddankeeda.
Angus wey ka badan tahay caadaysteen in ay diiraan xaaladaha cimiladaSidaa daraadeed, marka la abuuro caanahan oo ah cimilada cawska ah, xilliga qaboobaha, xayawaanka ayaa hubaal ahaan u baahan doona daaqado gaar ah oo ciriiri leh oo leh meel ku filan oo dhaqdhaqaaq ah.
Waxaa sidoo kale jira lo'da Angus ballaaran, miisaankiisu waa laba jeer miisaanka kuwa aan ku sharaxno. Waxaa jira noocyo badan oo u dhexeeya labadan nooc ee isku mid ah, gaar ahaan midabka coat.
Si kastaba ha noqotee, curyaanka ayaa faa'iido weyn u leh dabeecada dabacsan iyo dhaqaalaha content, inkasta oo ay si weyn uga xun yihiin waxqabadka.
Maxay yihiin muuqaalada kala duwan ee muuqaalka muuqaalka?
Midabkaas ka mid ah kuwan quruxda yar ee quruxda badani waa inta badan madow, iyo sidoo kale shaqaalahooda waaweyn. Maqaarka Angus ee laga soo bilaabo dhalashada waxaa lagu daboolay meel aad u ballaaran, laakiin maaha mid adag, jaakad.
Lugahooda waa kuwo gaaban, oo ka dhalan kara, asalkooda, jirku wuxuu u muuqdaa mid aad u weyn oo ballaaran. Jidhku waa mid gaaban oo aan dheereyn, koritaanka shakhsiga qaangaarka ah sida badan si ka baxsan 1 mitir.
Faa'iidooyinka lagu hayo lo'da Angus
Qeyb weyn oo loogu talagalay dayactirka ee lo'da ee caan this waa in wax soo saarka hilibka ay ka weyn tahay waxqabadka isla ee lo'da caadiga ah.
Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in lo'da cuuryaanka Ha u baahnayn wax badan oo cunto ah iyo booska daaqa wuxuu noqon karaa mid aad u xadidan.
Tusaale ahaan, si ay u noqoto lo'da 10 xayiraad Angus in ay gaaraan 300 kiilo garaam oo caadi ah iyaga muddo gaaban, waxay yeelan doonaan daaq ku filan 2 hektar.
Haddii, si kastaba ha ahaatee, waxaan ku hawlan nahay in la beero tarbiyada lo'da caadiga ah ee lo'da, ka dibna meeshan waa ku filan tahay in lagu quudiyo laba qof. Natiijo ahaan, kiiskii koowaad, markaad ka baxayso waxaan awoodi doonnaa in aan helno qiyaastii 3 kun oo hilib oo qumman oo cows ah, ama 1 kun oo hilib oo ah lo'da caadiga ah.
Faa'iidada ugu weyn ee haysashada lo'da Angus waa in ay u dhaqmaan si aan waxyeello u geysan deegaanka. Ma aha wax caadi ah oo iyaga loogu talagalay inay caleemaha ka soo baxaan laamood geed, iyaga oo ka tagaya caleemo la'aan, ama cawska dhadhan fiican leh dhulka oo si toos ah uga yimid asalka.
Caleemaha ay ku daaqaan lama jarjarin, laakiin waxay ku sii jirayaan cagaarka sida qashinka qaas ah.
Maxay yihiin cilladaha la midka ah ee caanaha ama dhibaatooyinka uu ku hayo ballanqaad dayactirka?
Qodobka ugu fiican ee lo'da macuulka macaanku waa daaqsinta meel bannaan. Waxaa iska cad in tani ay tahay inaad u baahato inaad haysatid beerkaaga, ama ugu yaraan goob beereed oo aad u ballaaran, taas oo laga yaabo in lo'dahaan la xiro.
Xilliga jiilaalka, si kastaba ha ahaatee, lo'du waxay sidoo kale u baahan doontaa in lagu daro qadar cayriin ah oo ah cuntada dhirta cusub ee cuntada, sababtoo ah hay ma buuxin kartid dhammaan wixii ku haboon ee loogu baahan yahay xayawaanka leh mareellooyin si ay u buuxiyaan maaraynta.
Waxqabadka xuduudaha ee lo'da Angus
Si ka duwan noocyada kale ee cufka kale ee lo'da, tarankan ayaa awood u leh inuu ku farxo waxqabad wanaagsan. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa in faa'iidada ay ka heli karto ma aha oo kaliya qaab caanaha, laakiin sidoo kale hilibka.
Xaqiiqdu waxay tahay in tirada qaansiirka Angus ee lo'da ay awood u leedahay inay gaaraan 250-350 kiilo (miisaankoodu waa buluug badanaa ka badan miisaanka lo'da).
Marka la eego qiyaasta cajiibka ah iyo qadarka caanaha la soo saaray ayaa sidoo kale si weyn u korodhay, shakhsiyaadka qaar waxay gaadhay 10 litir maalintii.